Baby sawrirrada - Maydho Baby sawrirrada u Baby Boy iyo Baby Girl
> Resource > Talooyin > Baby sawrirrada Fikradaha in Samee Custom Baby Scrapbooks
Baby keenaya waalidiinta iyo xubnaha kale ee qoyska farxad iyo xiiso leh, kaas oo lagu xusuusan doonaa nolosha oo dhan. Baby waa muhimka ah ee qoyska ka mid ah oo si xaqiiqo ah isha farxad. Waa in aad haysataa joonyaddiisa afkeeda ka buuxo oo ilmahaaga photos yeynan meel kasta oo ku saabsan qubeyska ilmaha, sanku neefle, ilmahaaga, tallaabo hore, dhalashada hore ...... Sidee ku saabsan helitaanka qaar ka mid ah fikradaha sawrirrada ilmaha iyo iyaga samaynta galay sawrirrada ah oo qurux badan si fiican u badbaadi kuwa xasuus qiimo ? Waxaad hadda abuuri karaan sawrirrada ilmo digital ka marto sawrirrada ilmaha oo lacag la'aan ah iyadoo qaar ka mid ah fikradaha sawrirrada ilmaha hal abuur leh iyo talooyin.
Baby qabayso sawrirrada Fikradaha
1. Mawduucan ah Maydho Baby : Scrapbooking. Waa sidaas oo caan ah haatan haweenka iyo gaar ahaan hooyooyinka shaqo-ka-guriga ka mid ah. Waxaa ka dhigi doonaa gaar ah qubeyska ilmaha haddii martida kasta abuuraa 2 pages sawrirrada ilmaha in uu noqdo. Oo dadkii oo dhammu ku scrapbooks dhammeeyayna ay qayb ka mid ah Xusuus weyn qubeyska ilmaha noqon doonaa. Waxaad jeclaan fiican in la ogaado on martiqaad qubeyska ilmaha haddii Roob scrapbooking ilmo ayaa la qorsheeyey. Hoos waxaa ku qoran tusaale ereyo martiqaad Roob scrapbooking ilmaha. Isticmaal marka aad ilmaha lagu marti Roob keligaa.
Noo yimid biiro Maydho sawrirrada Baby lagu sharfayo Julie Smith Saturday, November 30 At 5:30 pm ayaa Jones Home 8332 Leesburg Street Maydho siiyey Laurie Hansen iyo Stephanie White RSVP in 111-000-5555
2. Baby qabayso Keepsake Book . Kala duwan ka scrapbooks qubeyska ilmaha laga sameeyo martida. Tani waa fikrad ee xirma qubeyska ilmaha, oo aad isticmaali karto sawiro laga qaaday, qurxinta, iyo marsami si ay u sameeyaan scrapbooks labada dhaqanka ama digital u soo dirto hadiyad ilmaha.
3. sawrirrada Kit . Haraadiga ka xisbiga-marsami, kaararka hadiyadda, kaarka martiqaadka, qolfaha hadiyad, iwm soo ururin karto sida Kit gaar ah sawrirrada in la isticmaalo u sameynta sawrirrada ilmaha. Waa hubaal keepsake kale oo wanaagsan.
Baby sawrirrada Fikradaha:
Dhacdo kasta oo ilmahaagu wuxuu noqon doonaa xasuusta fiican. Sidaas qaado sawiro badan intii suurto gal. Ka dib waa daqiiqado qaar ka wanaagsan in lagu soo qabto:
* Qubeyska First, hore deminta, dhoola hore, markii hore fadhiya, talaabooyinka ugu horreeya, sanad jirsan, Christmas, ama ciidaha kale ...
* Ilmaha lagu hayo by qaraabada, wajiga, hurdada ilmahaaga, ilmo cabursanaan
* Jijin Hospital, shahaadada dhalashada, kaararka hanbalyo iyo ubaxyo lagu tuujiyey, iwm
Baby Gabar / Wiil sawrirrada Fikradaha
Iyadoo la tixgelinayo sawrirrada ilmaha, buluug ah waxaa loogu talagalay sawrirrada ilmaha wiil, halka pink waa u sawrirrada gabar. Laakiin taasi ma aha mid sugan. Midabada kale ee la mid ah buluug ah ama casaan ayaa sidoo kale la aqbali karo.
Waa fikrad fiican in aad ku darto ereyo caanka ah: waa gabar, waa wiil ..., laakiin ugu horreeya oo dhan, go'aan theme ah. Waxaad dooran kartaa mawduuc ka mid ah iimaanka, isboortiga, music, cartoon, iyo wixii la mid ah. Diinta iyo isboortiga waxaa laga yaabaa in ay ku habboon sawrirrada ilmaha wiil; music iyo cartoon wanaagsan sawrirrada gabar.
Samaynta sawrirrada ilmaha waa shaqo fudud haddii aad isticmaasho DVD Muqaal dhise . Hadda download software ayna u isticmaasho fikradaha ku xusan in ay tijaabiyaan.